अरु कुरा मात्र गर्छन, म चुनिखेलको काम गर्ने मान्छेः उम्मेदवार श्रेष्ठ (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २८ गते ०२:०० मा प्रकाशित
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँको उत्तरी भेगमा रहेको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका नेपाली कांग्रेस वडा नं. १३ का अध्यक्ष उम्मेदवार महेन्द्र श्रेष्ठसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
वडावासीहरुको पहुँचमा पुग्नका लागि के कस्ता गतिविधिहरुलाई अगाडी लैजानु भईरहेको छ ?
मनोनयन दर्ता पछि हामी उम्मेदवारहरु घर–घरमा गएर मत माग्ने काम गरिरहेका छौँ । यो समयमा पनि मत माग्ने क्रममा नै छौँ ।
वडावासीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाईरहनु भएको छ ?
विकासका कामहरु नेपाली कांग्रेसले अगाडी बढाएको हुनाले सबै तिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ अहिलेसम्म ।
वडावासीको मन जित्नको लागि आफ्नो घोषण पत्रलाई पनि अगाडी सार्नु भएको छ होला, के छ योजना ?
देश भरी नै पार्टीको आफ्नै घोषण पत्र छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर १३ मा के गर्न सकिन्छ भोली दिनहरुमा र पहिला हामीले के–के गरेका थियौ भन्ने हिसाबमा आफ्नै खाका तयार गरेका छौँ । त्यही हिसाबमा अगाडी बढिरहेका छौँ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको सबैभन्दा पिछडिएको र दुर्गम भन्नु पर्छ साविकको चुनिखेल (हालको १३ नम्वर वडा) । यहाँको मुख्य समस्या भनेको बाटो हो । खानेपानिको समस्या पनि हो । अहिले खानेपानिको लागि दुई करोड रुपैया विनियोजित भएर ट्यांकि बनाउँने क्रममा छ । यहाँ हामीले धेरै विकासका कामहरु गरिरहेका छौँ । माननिय स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको सांसद कोषबाट चुनिखेल सापताल सडक निर्माणमा लागिरहेका छौँ ।
अब यहाँ खानेपानि, ढल, चोक–चोकमा इटा तथा ब्लगहरु छाप्ने काम गरिरहेका छौँ । बाकि रहेका कामहरुलाई पनि निरन्तर निर्माण गर्दै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ ।
बुनपा नेपाली कांग्रेस वडा नं. १३ का अध्यक्ष उम्मेदवार महेन्द्र श्रेष्ठसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानीका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः